किन चढाउनु हुदैन गणेश भगवानलाई तुलसी ? जान्नुहोस् – Khabar Art Nepal
By Pasang Tamang	 On २८ चैत्र २०७५, बिहीबार ०५:५७
काठमाडौं । त्यसो त भगवान् गणेशलाई पूजामा धेरै कुरा चढाइन्छ तर दूबोको चाहिँ विशेष महत्त्व छ । दूबोविना उहाँको पूजा नै पूर्ण हुँदैन ।अनि तुलसी चाहिँ भगवान् विष्णुको प्रिय बिरुवा हो । तुलसीलाई विष्णुको एक रूप नै मानिन्छ । तर गणेशजीलाई तुलसी अप्रिय लाग्छ । गणेश पूजनमा तुलसीको प्रयोग वर्जित छ ।दूबोका सम्बन्धमा एउटा कथा भेटिन्छ । कथाअनुसार प्राचीन समयमा अनलासुर नामक असुर थियो । उसले धर्ती र स्वर्गमा आतंक फैलाएको थियो । अनलासुर ऋषिमुनि र सर्वसाधारणलाई जिउँदै निल्थ्यो ।
नुहाउनु अघि कपालमा किन तेल लगाउनुपर्छ ? जानीराखौ कपालमा तेल लगाउदाको फाइदाहरु